I-imeyili Ihlanganisa Kanjani Ukumaketha Kweziteshi Eziningi | Martech Zone
I-imeyili ihlanganisa kanjani ukumaketha kweziteshi eziningi
NgoLwesibili, Januwari 8, 2013 NgoLwesibili, Januwari 8, 2013 UJenn Lisak Golding
Kulesi sikhathi esiphila kuso, ukumaketha kuhlangene ngezindlela eziningi. Kusuka kumabhulogi kuya ezinkundleni zokuxhumana kuya kuma-infographics kuya ku-imeyili, kubalulekile ukuthi yonke imiyalezo yethu ihambisane futhi ihlanganiswe. Sithole eminyakeni edlule ukuthi i-imeyili ingumongo we ukumaketha kweziteshi eziningi.
Sisebenze nabangane bethu eDelivra ukudala le infographic ngokuthi i-imeyili isiza kanjani abathengisi ukuhlanganisa nokuqinisa imiyalezo yabo yokumaketha. Ubuwazi ukuthi ama-75% wabasebenzisi bezokuxhumana babheka i-imeyili njengomyalezo wabo abawuthandayo wokuxhumana nezinkampani? Kukhulu lokho. I-imeyili ukumaketha okusekelwe kwimvume, okusho ukuthi umthengi noma okulindelekile anganquma ukuzibandakanya nemibandela yakhe. Ukusebenzisa le ndlela ngendlela efanele kungathuthukisa kakhulu ukuguqulwa, ikakhulukazi uma kuvumela ithuba lokukhetha nokukhetha ukuthi bafuna ukuzibandakanya kanjani.
Izinselele Zokumaketha Nge-imeyili
Enye yezinselelo esibe nazo ukugcina ukuthengisa kwethu nge-imeyili. Sibe nesikhathi sokumaketha nge-imeyili kulo nyaka nazo zonke izinhlelo zethu ezimatasa, kepha muva nje sisanda kuqala ukubathumela futhi. Ukhiye wokumaketha nge-imeyili ukuba nosuku nesikhathi othumela ngaso ama-imeyili akho. Hlela isikhathi ekhalendeni lakho ukuze uqiniseke ukuthi wenza okuqukethwe kwakho nokuklanywa kwakho kwenziwe kumkhankaso wakho we-imeyili kulelo sonto. Dala ikhalenda lokuqukethwe, itimu yama-imeyili wakho, nezindlela zokuthuthukisa i-imeyili yakho. Ukuhlela kuvame ukuholela esenzweni.
Uma ungasebenzisi ukumaketha kwe-imeyili, kufanele ubheke kanzima izindlela zokuchofoza nokuzibandakanya okungenzeka ulahlekelwe yikho. Cabanga ngakho - abantu abaningi babheka i-imeyili yabo nsuku zonke. Kungani ungasebenzisi ukumaketha nge-imeyili? Kungenzeka kanjani ukuthi usebenzisa ukumaketha nge-imeyili? Le yimibuzo okufanele uzibuze yona njengenhlangano.
Usebenzisa kanjani i-imeyili emisebenzini yakho yokumaketha eneziteshi eziningi?
Tags: umkhankaso wokumakethaImikhankasoimeyili MarketingI-Marketing Infographicsukumaketha kweziteshi eziningi
Jan 9, 2013 ngo-7: 26 PM
Siyabonga ngokuthumela lo Jenn!
Jan 22, 2013 ku-8: 29 AM
I-infographic enhle, kepha ngingasho ukuthi i-imeyili iyisiteshi uqobo lwayo, futhi idatha yamakhasimende yiyo ehlanganisa iziteshi ndawonye.